XASAASI: Tababare Jurgen Klopp Oo Taleefan Toos Ugu Wacay Kalidou Koulibaly & Dareenka Uu Qabo Daafaca Napoli Oo La Ogaaday - Gool24.Net
XASAASI: Tababare Jurgen Klopp Oo Taleefan Toos Ugu Wacay Kalidou Koulibaly & Dareenka Uu Qabo Daafaca Napoli Oo La Ogaaday
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa lasoo warrinayaa inuu taleefan toos ugu wacay daafaca dhexe ee kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly oo saxeexiisa lala xidhiidhinayo kooxo badan oo ay Reds kamid yihiin.
Klopp ayaa uga sheekeeyay Koulibaly waxa uu qorshahiisu yahay sanadka dambe isaga oo dhinaca kale faah-faahin ka siiyay sida ay ugu wada haboon yahiin safkiisa daafaca isaga iyo Virgil Van Dijk.
28 sano jirkan oo loo badinayo inuu si dhakhso ah uga hayaami doono Napoli ayay bar-tilmaameed ka dhiganayeen dhawaanahan kooxo ay kamid yihiin Real Madrid, Barcelona, Man United, Paris Saint-Germain iyo Newcastle United.
Laakiin sida uu sheegayo wargeyska ree France ee Le10Sport, Liverpool ayaa hoggaanka saxeexa Koulibaly ka hoos xaday kooxaha kale iyadoo uu wargeysku sheegayo in dareen ahaan uu 28 sano jirkaasi la dhacay taleefanka uu ka helay Klopp.
Arrinta taleefan ku wicista ayaa ah mid si wanaagsan horeba ugu shaqaysay tababare Klopp isaga oo dhawaan la hadlay weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner kaas oo sidoo kale doonaya inuu ku biiro Reds.
Heshiisyada ay kooxaha waaweyn ee Yurub dhammaynayaan xagaagan ayaa noqon doona kuwo sidii hore ka kakan maadaama oo uu dhaqaalaha kooxahaas dhulka la galay xanuunka safmarka ah ee Korona.
Koulibaly ayay kooxdiisa Napoli ku qiimayn jirtay 90 Milyan oo Pound walow la filayo inay markan aqbali doonto lacag intaas ka hooseysa oo qiyaastii 65 Milyan ah.
65-kaas Milyan ayaa wali lacag badan ku noqon karta Liverpool oo horeba u diiday inay 50 Milyan oo Pound ka bixiso Timo Werner.